ပြီးခဲ့သည့်သုံးလပတ်အတွင်း Android အသုံးပြုသူများသည် application ပေါင်းသန်း ၂၈၀၀၀ ကျော်အား download လုပ်ယူခဲ့သည် Androidsis
ပြီးခဲ့သည့်သုံးလပတ်အတွင်း Android သုံးစွဲသူများသည်အက်ပလီကေးရှင်း ၂၈ ဘီလီယံကျော်ကိုဒေါင်းလုပ်ချခဲ့သည်
Ignacio Sala | | Android application များ, Android ဂိမ်းများ
၂၀၂၀ ခုနှစ်၏ဒုတိယသုံးလပတ်သည်သန်းထောင်ချီသောလူများမှာရှိခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်၊ ပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့်နေ့ချင်းညချင်းလေ့လာခြင်း၊ coronavirus ကူးစက်ခံရခြင်းမှကာကွယ်ရန်သူတို့၏နေအိမ်များတွင်သော့ခတ်ထားခြင်းခံရသည်။
ဓာတ်ဆီသုံးစွဲမှုနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုပြတ်တောက်နေချိန်တွင်အသုံးပြုခြင်း ဒီဂျစ်တယ် streamimg ရှိဗီဒီယိုကုမ္ပဏီအားလုံးကိုအတင်းအဓမ္မခိုင်းစေခြင်းကြောင့် bandwidth ကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည် ဥရောပ၌အင်တာနက်ကို crashing မှတားဆီးနိုင်သည် တစ်နေ့လုံးဤ ၀ န်ဆောင်မှုမြင့်မားစွာအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါတို့ပြောမယ် ဒီဂျစ်တယ်, ငါတို့သည်လည်း app ကို downloads အကြောင်းပြောဆိုရန်ရှိသည်။ များစွာသောဤကူးစက်ရောဂါကာလအတွင်းအသုံးပြုသူများ download လုပ်ထားသော application များမှာအချို့မှာပျင်းစရာကောင်းပြီးအချိန်ကိုဖြတ်သန်းရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်။ သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ.
Sensor Tower ၏အဆိုအရ Play Store တွင်အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဂိမ်းများကို download ဆွဲသူအရေအတွက်သည် ၂၀၂၀ ၏ဒုတိယသုံးလပတ်အတွင်းဖြစ်သည် သန်း 28.000 ကျော်COVID-34,9 နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ များမည်သို့ပြောင်းလဲသွားမည်ကိုမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှမစဉ်းစားနိုင်သည့်ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၃၄.၉% တိုးလာခြင်းကိုကိုယ်စားပြုသောအရေအတွက်။
ယုတ္တိနည်းအရ Apple App Store သည် download အရေအတွက်တိုးများလာသည်ကိုတွေ့ရသည် အနိမ့်အတိုင်းအတာအထိဒေါင်းလုပ် (၉.၁) ဘီလီယံအထိရှိပြီး (၂၀၁၉) ခုနှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက (၂၂.၆) ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာသည်။
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောအက်ပလီကေးရှင်းအများစုမှာ Q2020 XNUMX တွင်ဖြစ်သည်
Apple App Store မှာ၊ ဤကာလအတွင်း downloaded အပလီကေးရှင်းသည် Zoom ဖြစ်သည်ဒေါင်းလုပ် ၉၄ သန်းနှင့် TikTok သည်ဒေါင်းလုပ် ၆၇ သန်းဖြင့်ဒုတိယနေရာတွင်ရှိသည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် Play Store အကြောင်းပြောဆိုပါက Zoom သည်ဒေါင်းလုပ်သန်း ၂၀၀ ကျော်ထက် 200% တိုးလာသည်ဆိုသော်လည်း၊ TikTok နှင့်မအောင်မြင်ပါ, ecပြီလမှဇွန်လအတွင်း Android ဂေဟစနစ်အတွင်းဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောအများဆုံး application ။
ပထဝီအနေအထားအရဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည့်အချက်အလက်များကိုအမေရိကန်နှင့်ဥရောပသို့သာကန့်သတ်ထားလျှင်၊ Zoom သည်ပလက်ဖောင်းနှစ်ခုလုံးတွင်အများဆုံး download လုပ်ထားသော application ဖြစ်သည်။
ငါတို့ကဂိမ်းအကြောင်းပြောရင်တရုတ်ကို Save! ခြင်္သေ့စတူဒီယိုကနေ အများဆုံးဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောဂိမ်းဖြစ်ခဲ့သည် သန်း ၁၀၀ ကျော်အတူတကွ downloads အတူ platform များရောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » ပြီးခဲ့သည့်သုံးလပတ်အတွင်း Android သုံးစွဲသူများသည်အက်ပလီကေးရှင်း ၂၈ ဘီလီယံကျော်ကိုဒေါင်းလုပ်ချခဲ့သည်
Galaxy Tab S7 ၏နောက်ခံပုံများကို၎င်းကိုမတင်ပြမီဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ
Hills of Steel2ရှိသင့်စိတ်ကြိုက်အကြံပေးအဖွဲ့ရှိအခြားကစားသမားများကိုတိုက်ခိုက်ပါ